Kuva Munhu Ane Tsika Kune Basa Here? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kachin Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Zvinokosha Here Kuva Munhu Ane Tsika?
‘Vanhu havandikwazise saka ndingavakwazisirei?
‘Zvine basa here kuti nditi “ndinokumbirawo,” “mazvita,” kana kuti “pamusoroi”?’
‘Handioni chikonzero chokuti ndiremekedze vanun’una kana hanzvadzi dzangu nokuti ndevemumhuri.’
Pane zvataurwa pamusoro apa, pane zvaunobvumirana nazvo here? Kana zviripo, ungangove uri kuzvitadzisa kuwana zvinhu zvakanaka zvinobva pakuva netsika dzakanaka!
Zvaunofanira kuziva nezvetsika
Zvaungaita kuti uve netsika
Kuva netsika dzakanaka kunokubatsira pazvinhu zvitatu zvinotevera:
Maonerwo aunoitwa nevamwe. Mabatiro aunoita vamwe anoita kuti vamwe vakuone zvakanaka kana kuti zvakaipa. Kana uine tsika, vanhu vachakuremekedza. Kana usina hanya zvichaita kuti vamwe vasafunga nezvako panomuka mikana yebasa kana zvimwewo zvinhu. Bhaibheri rinotiwo, ‘munhu ane utsinye anozviunzira dambudziko.’​—Zvirevo 11:17.
Kuwirirana kwaunoita nevamwe. Bhaibheri rinoti: ‘Pfekai rudo nokuti runoita kuti pave nokubatana.’ (VaKorose 3:14) Izvi zvinonyanya kushanda kuvanhu vanenge vari shamwari neshamwari. Kana uine tsika uye uchibata vamwe zvakanaka zvichaita kuti vamwe vade kushamwaridzana newe. Ndiani anoda kushamwaridzana nemunhu ane utsinye uye anogumbura vamwe?
Mabatirwo aunoitwa nevamwe. Jennifer anoti, “Kana uchibata vamwe zvakanaka zvichapedzisira zvaita kuti kunyange vaya vanonzi havaite vagumisire vava kukuitira zvakanaka.” Asi kana usingabati vamwe zvakanaka muchawedzera kutatsurana. Bhaibheri rinoti: ‘Muchayerwa nechiyereso chamuri kuyera nacho vamwe.’​—Mateu 7:2.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva: Mazuva ose tinosangana nevanhu vakasiyana-siyana. Maitiro ako ndiwo achaita kuti vakuremekedze kana kuti vasakuremekedze. Saka zvinokosha kuva munhu ane tsika!
Imbozviongorora kuti une tsika dzakadini. Zvibvunze kuti: ‘Ndinotaura nevanhu vakuru zvine ruremekedzo here? Kangani pandinotaura mashoko okuti “ndinokumbirawo,” “mazvita,” kana kuti “pamusoroi”? Pandinenge ndiine vamwe, ndinombokanganwa nezvavo here ndava kubaya-baya foni? Ndinoremekedza vabereki, vanun’una kana hanzvadzi dzangu here kana kuti ndinongoita zvachero nokuti ndevomumhuri?’
Bhaibheri rinoti: “Pakukudzana tungamiriranai.”​—VaRoma 12:10.
Ronga zvaunoda kuzoita. Nyora zvinhu zvitatu zvaunoda kugadzirisa patsika dzako. Kana ari Allison ane makore 15, akati anoda “kuzonyatsoteerera vamwe pavanenge vachitaura kwete kuti iye angoramba achitaura.” David ane makore 19 anoti anoda kudzidzira kuti asabaya-baya foni kana aine vomumhuri kana shamwari. Anoti “Kuita izvi hakusi kuremekedza vamwe nokuti unenge uchivabata sokuti havakoshi kupfuura zvauri kuita pafoni.” Edward ane makore 17 anoti anoda kusiya tsika yokudimburira vamwe vari pakati pokutaura. Kana ari Jennifer ambotaurwa kare, anoti ari kuda kugadzirisa unhu hwake kana aine vanhu vechikuru. Anoti “Ndaingoti ‘mhoroi’ ndobva ndaenda kune vezera rangu. Asi iye zvino ndava kuzvipa nguva yokuti ndikurukure navo uye izvi zviri kundibatsira chaizvo kuva netsika!”
Bhaibheri rinoti: ‘Ivai nehanya nezvinodiwa nevamwe kwete chete zvamunoda imi.’​—VaFiripi 2:4.
Pazvinhu zvawanga wakanyora, ndezvipi zvauri kugona? Kwemwedzi wose ongorora mataurire uye maitire ako pazvinhu zvaunoda kugadzirisa patsika dzako. Panopera mwedzi, zvibvunze kuti: ‘Zvandave ndichiita zvandibatsira sei pakuva netsika? Ndichiri kuda kugadzirisa papi?’ Chironga zvimwe zvaunoda kuzogadzirisa.
Bhaibheri rinoti: “Zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo saizvozvo.”​—Ruka 6:31.
Waizviziva here? Zvinhu zvinonzi ndidzo tsika kune imwe nzvimbo zvinonzi kushaya unhu kune imwe. Somuenzaniso, vanhu vokuJapan vane tsika yokubvisa shangu pamusuo asi kune dzimwe nyika izvi zvinoonekwa sokusaremekedza. Kwaunogara kunoitwa tsika dzipi?
“Vanhu vanokurumidza kuzviona kana uine tsika. Newewo unonzwa kufara nokuti unenge uchiziva kuti uri kuita zvakanaka.”
“Kana usina tsika vanhu vachakuona sebenzi. Asi kana uchivaremekedza vachakuremekedzawo.”
Chii chakaipira kutaura mashoko akaora?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvinokosha Here Kuva Munhu Ane Tsika?
ijwyp nyaya 32
Ndingaita Sei Kuti Ndisaramba Ndichingofunga Bonde?
Ungaita Sei Kuti Usabvume Kufurirwa Kuita Zvebonde?
Ko Kana Ndisiri Kukwana Pane Vamwe?
Ndingaita Sei Kuti Ndisaramba Ndichinyara?
Kuva Neshamwari Dzakawanda paSocial Media Kune Basa Here?
Ndatyora Mutemo Wevabereki Vangu, Ndoita Sei?
Ndingapedza Sei Homuweki Yangu?
Ndoita Sei Kana Ndiri Kufoira Kuchikoro?
Ndingaita Sei Kuti Ndibudirire Ndichidzidza Ndiri Kumba
Unofanira Kusiya Chikoro Here?
Ndingaita Sei Kuti Ndiwirirane Nemudzidzisi Wangu?
Ndingadzidzisa Sei Hana Yangu?
Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Chikamu 1: Kubhabhatidzwa Kunorevei?
Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Chikamu 2: Kugadzirira Kubhabhatidzwa
Ndingaitei Kuti Ndisaramba Ndichingofunga Kuti Pane Zvakaipa Zvichaitika?
Ndingaita Sei Kuti Ndidye Zvekudya Zvinovaka Muviri?
Ndingaita Sei Kuti Ndive Nemuviri Mutete?
Ndingaita Sei Pandinoudzwa Zvandinofanira Kugadzirisa?
Nei Ndichifanira Kukumbira Ruregerero?
Kuita Zvinhu Zvakawanda Panguva Imwe Chete Kwakanaka Here?
Ndingaita Sei Kuti Pfungwa Dzangu Dzirambe Dziri Pachinhu Chimwe Chete?